"Andriamanitra dia mazava, ary tsy misy maizina akory ao aminy. " 1 Jaona 1:5
"Ary Jesosy niteny tamin’ny olona indray ka nanao hoe : Izaho no fahazavan’izao tontolo izao ; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’aina." Jaona 8:12
“Andriamanitra dia mazava, ary tsy misy maizina akory ao aminy.” Teny tahaka izany dia mampahatsiahy ny voninahitr’Andriamanitra, ny fahadiovany tanteraka, tsy miankina amin’inona na inona, tsy mety simba. Teny manaporofo ny fitakiany fahazavana sy fahamarinana. Teny manome antsika fanantenana hahafantantra tsara, fa tsy sombintsombiny (1 Korintiana 13:12), nefa manameloka izay rehetra mety ho hambo hisehoana eo anatrehan’Andriamanitra miaraka amin’ny ota. Andriamanitra dia masina, lavorary, tsy misy faharatsiana na aloka kely akory. Ny fifaliantsika sy ny fiombonantsika aminy dia mifamatotra amin’ny maha fahazavana Azy, satria Izy no mitsilo ny fieritreretantsika sy manazava izany mba hampiseho amintsika izay tokony hodiovina.
Ny mazava dia mampiseho ny zavatra rehetra. Rehefa hazavain’Andriamanitra ny foko, dia miseho ny haratsiny ; tsy araka ny anamarimarinako ny tenako, na araka izay isehoako amin’ny hafa. Loza! Tsy misy olona mahatanty izany fahazavana izany, izany hery mandinika ny fo izany (Salamo 139), raha tsy mialoka amin’i Jesosy.
Satria “Andriamanitra dia mazava”, dia tiany hanana toerana “ao amin’ny mazava” ny olona, hanana fiombonana amin’Ilay Andriamanitra finaritra (1 Timoty 1:11). Eo amin’ny tontolo hita maso dia misy ny fahazavana, miasa sy mamiratra. Toy izany koa, Andriamantra dia naneho sy nampahafantatra ny tenany. Miasa tsy tapaka Izy, amin’ny alalan’ny Fanahiny, mba hampisy ny aina sy hihazona izany. Mamafy fanomezan-tsoa amin’ny zanany Izy (Jakoba 1:17), manazava ny fony mba hampahalala azy ireo ny voninahiny eo amin’ny tavan’i Jesosy Kristy (2 Korintiana 4:6).